Nai Nai: မိမိသုံးနေတဲ့ social network အကောင့်တွေ အခိုးမခံရအောင် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ?
မိမိသုံးနေတဲ့ social network အကောင့်တွေ အခိုးမခံရအောင် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ?
အကောင့်အခိုးခံရတယ်၊ အဟက်ခံရတယ်လို့ ခဏခဏ ကြားနေရပါတယ်။ စာရေးသူ စဉ်းစားကြည့်လိုက် ပါတယ်။ ဘာလို့ သူတို့တွေချည်း ကွက်ကြားမိုး ရွာလို့ အကောင့်တွေ အခိုးခံနေရတာပါလိမ့်လို့။ မသိသူ ကျော်သွား သိသူဖော်စားဆိုတာထက်၊ မသိသူတွေချည်း ခံနေရပုံ ပေါက်ပါတယ်။
ဘာလို့ Account တွေ အခိုးခံရ သလဲ?
Posted 3:46 PM by Nai Nai in Labels: Blogger
0 comment(s) to... “ မိမိသုံးနေတဲ့ social network အကောင့်တွေ အခိုးမခံရအောင် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ? ”